Facts First, Truth Foremost - Online News Portal from Nepal in Nepali & English Language
एमालेले भन्यो- मन्त्री र तक्मामा परमादेश साट्ने अपवित्र गठबन्धनको परिणाम सर्वोच्चमा देखियो
Tue, 10/26/2021 - 08:23
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको गुटबन्दी, विग्रह र चरम अराजकताको कारक असार २८ को परमादेश नै रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिरबाट भइरहेको बहिर्गमनको दबाबप्रति मुख खोल्दै एमालेले सत्ता गठबन्धन र अदालतको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम देखिएको दावी गरेको हो ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो वक्तव्यमार्फत एकजना व्यक्तिलाई निशाना बनाएर चलाइएको अहिलेको अभियानको उद्देश्य अदालतका विकृति अन्त्य गर्ने नभएर झनै संस्थागत गर्ने र आफूले भने अनुसारको फैसला सुनिश्चित गर्नुमात्र रहेको बताएका छन् ।
ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको विग्रह, गुटबन्दी र चरम अराजकता दुर्भाग्यपूर्ण छ। न्यायालयमा समस्या विगतमा पनि थियो, तर यसको उत्कर्ष असार २८ को फैसलाका क्रममा देखा पर्‍यो। निश्चित राजनीतिक नेताहरूको सत्ता स्वार्थका लागि अदालतले अनुकूल फैसला गरिदिने, सट्टामा नेताहरूले न्यायाधीशहरूमध्ये कसैलाई मन्त्री त कसैलाई तक्मा उपहार दिने । यही अपवित्र गठबन्धनको परिणाम हो आजको विकृति।’
प्रवक्ता ज्ञवालीले ‘युज एण्ड थ्रो’ अभियानले भोलि अरुलाई पनि चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई जस्तै शिकार बनाउने बताएका छन् । अदालतले सत्ता गठबन्धनको अनुकुल फैसला गरिदिने र सट्टामा गठबन्धनले कसैलाई मन्त्री र कसैलाई तक्मा दिने गरेको परिणाम अहिले देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
अलौकिक मार्दी हिमालसम्मको अविस्मरणीय पदयात्रा
Tue, 10/26/2021 - 08:19
करिब डेढ वर्षसम्म कोरोना कहरका कारण हाम्रो दैनिकी निरस र त्रासबीच बित्यो । घरभित्रै थन्किएर बस्नुपर्यो । बाहिरी दुनियाँको रमाइलो देख्न मुस्किल थियो ।
तर अहिले परिवेश परिवर्तन भएको छ । कोरोना संक्रमण कम भएसँगै चहलपहल बढेको छ । अरु क्षेत्र जस्तै आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रमा पनि आशाको किरण देखिएको छ ।
यसपालिको दसैंलाई सार्थक बनाउन र विदाको सदुपयोग गर्न हाम्रो परिवारले मार्दी हिमालको पदयात्रा गर्ने निर्णय गर्‍याे । लामो समयदेखि यस्तो यात्रामा जान नपाएकी म निकै खुसी भएँ ।
१० मिनेटको छलफलपछि नै मेरा श्रीमान र दुई छोरासँग म पनि पदयात्रामा जाने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
फुलपातिको राति १० बजे योजना बन्यो । राति नै हामीले यात्राका लागि आवश्यक सामग्री प्याकिङ गर्यौं । अष्टमीको दिन बिहान ९ बजे हामी निजी गाडीमार्फत घरबाट निस्कियौं । सडकमा खासै सवारी जाम थिएन । साँझ ५ बजे त हामी पोखरा पुगिसकेका थियौं ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिरबाट भए पनि सुक्ष्म अवलोकन गर्दै हामीले लेकसाइडको रिसोर्टमा पहिलो रात बितायौँ । अर्को दिन बिहान साढे ८ बजे आफ्नो गाडी होटलमै पार्क गरेर ट्याक्सीमा धुम्पुसतिर डोहोरियौं ।
दायाँबाँया मनोरम दृश्य नियाल्दै करिब दुई घण्टामा हामी धम्पुस पुग्यौं । खुलेका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्य मन र क्यामेरामा कैद गर्दै पदयात्रामा लम्कियौं ।
करिब साढे १२ बजेतिर हामी खाना खान पोथनाको एउटा होटलमा पुगेर सुस्तायौं । होटल सञ्चालिकाको आतिथ्यता र मीठो परिकारले हामी सबैको मनमा सकारात्मक ऊर्जा भर्यो ।
ढिलै भए पनि केही तंग्रिन थालेको होटल व्यवसाय देखेर मन रमाइरहेको थियो ।
रात झमक्क परेको थियो । हाम्रो त्यो दिनको बास फोरेस्ट क्याम्पमा अवस्थित एउटा होटलमा भयो । त्यहाँ पनि थरिथरीका परिकारहरु खान पाउँदा दसैं मनाउन नपाएको दुख बिर्सियौं ।
यात्राको दोस्रो दिनलाई स्वागत गर्दै थोरै चिया खाजापछि हामी सुनसान र घना जंगलको बाटो हुँदै अगाडि बढ्यौं । कयौं आन्तरिक पर्यटकहरु फर्कदैँ थिए र केही विदेशी पर्यटकहरु पनि आफ्ना भरिया र गाइडहरुसँगै ओरालो झर्दै थिए ।
कोककत्ताबाट आएका कयौं पदयात्रीसँग हाम्रो वार्तालाप भयो र केही त अन्नपूर्ण पदयात्रालाई टुङ्गो लगाएर पुनः यो पदयात्रामा अगाडि बढिरहेका थिए ।
पदमार्ग सफा र प्रष्ट थियो । रुखहरुमा रंगाइएको सेतो र निलो रंगले हामीलाई दिशानिर्देश गरिरह्यो । बादलडाँडा भन्ने ठाउँमा दिउँसोको खानापछि केही सुस्तायौं ।
करिब ३ बजे हामी हाइक्याम्पमा पुग्यौँ र त्यहाँबाट देखिने सुन्दर हिमालहरुको रमणीय दृश्य र सूर्यास्तको सुन्दरताले मन पुलकित भयो ।
पहिलेको तुलनामा यहाँ होटेलको संख्या बढेको रहेछ । र पछिल्ला दिनमा होटलमा ग्राहकको चाप पनि बढेको व्यवसायीहरुले बताए । सबै वस्तुहरु खच्चड र भरियामार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ।
त्यस ठाँउमा रातको खानापछि हामी चाडैँ आफ्नो ओछ्यानतिर गयौं । किनकि अर्को दिन सबेरै भ्यू प्वाइन्ट पुगेर सूर्योदयको किरण हिमालमा परेको हेर्नुथियो । कति लोभलाग्दो होला त्यो दृश्य भन्ने कौतुहलता थियो ।
बिहान ४ बजे मोबाइल टर्चको उज्यालोमा हामी खुड्किला चढ्दै उकालो लाग्यौं । करिब पौने २ ‍घण्टामा हामी भ्यू प्वाइन्ट पुग्यौं । सूर्योदय र सूर्योदयको किरण हिमालमा परेको मनमोहक दृश्य शब्दमा वर्णन गर्न कठिन छ । उक्त दृश्यलाई आँखा र क्यामेरामा कैद गरेपछि पोखरा फर्कियौं । त्यहाँबाट अझै दुई घण्टा हिँडेमा बेस क्याम्प पुगिने रहेछ । तर हामीलाई पोखरा फर्कनु थियो ।
बिहानको खाजापछि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौ । ‘लो क्याम्प’सम्म पहिले गएकै मार्ग हुँदै छोटो बाटो जाने लोभले सिदिङ मार्ग रोज्यौं । वर्षातको पानीले बाटो अत्यन्तै बिग्रेको रहेछ । पाँच घण्टाको हिँडाइपछि हामी सिदिङ पुग्यौं ।
सिदिङको ओरालो यात्रा अत्यन्तै कष्टकर रह्यो, जसबाट हामीले केही पाठ पनि सिक्यौं– हतारमा अप्ठेरो बाटो रोज्न नहुने रहेछ । पहिले गएकै गोरेटो हुँदै फर्किएको भए यो पदयात्रा सोचेभन्दा अझ रमणीय हुने थियो होला । समग्रमा अचानक तय भएको हाम्रो यात्रा निकै रोमाञ्चक रह्यो ।
Tue, 10/26/2021 - 07:54
Tue, 10/26/2021 - 07:16
एजेन्सी । मुजिव उर रहमान र रशिद खानको स्पिन बलिङ सामना गर्न नसक्दा ट्वान्टी–२० विश्वकपको सुपर–१२ अन्तर्गत स्कटल्याण्डले अफगानिस्तानसँग १ सय ३० रनको हार ब्यहोरेको छ ।
स्कटल्याण्डले विश्वकपको दोस्रोचरणमा पहिलोपल्ट खेलेको हो । युएईको सारजाहमा १ सय ९१ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएका उनीहरु ६० रनमै समेटिए ।
मुजिवले २० रन खर्चेर ५ विकेट लिए । पहिलो विश्वकप खेल्दै गरेका उनको यो करिअरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन थियो । अर्का प्रभावशाली स्पिनर रशिदले ९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानलाई रोक्न स्कटल्याण्डका बलरहरु असफल रहे । १९०–४ को योगफल जारी विश्वकपकै सर्बाधिक हो । अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यानले ११ छक्का प्रहार गरेका थिए । त्यसमध्ये एउटा त रंगशालाबाट बाहिर पुगेको थियो ।
अफगान टोलीका लागि जनिवुल्लाह जदरानले ३४ बलमा ५९, रहमनुल्लाह गुर्वाजले ३७ बलमा ४६ तथा हजरतुल्लाह जाजाईले ३० बलमा ४४ रनको योगदान गरेका थिए ।
अफगानिस्तानले अर्को खेल नामिवियासँग खेल्नेछ । त्यसबाहेक समूह २ मा रहेका बलिया टोलीहरु न्युजिल्याण्ड, भारत र पाकिस्तालनसँग खेल्नुपर्नेछ ।
आज देशभर एमालेको पालिका अधिवेशन हुँदै
Tue, 10/26/2021 - 07:03
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थानीय तहस्तरीय अधिवेशन आज हुँदैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीमा रहेको एमालेले वडा अधिवेशनपछि आज गाउँपालिका र नगरपालिकामा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।
एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा गर्ने निर्णय पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णयअनुसार ६ गते देशभर वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
प्राविधिक र भौगोलिक कारणबस केहि स्थानीय तहमा सम्भव नभए पनि आज अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा अधिवेशन हुँदैछ ।
सिरहाको लहान नगरपालिकामा भने आइतबार नै नगर अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
जनकपुरधाम । सिरहाको सिरहा नगरपालिका १८ का वडा अध्यक्ष रामसोगारथ यादव लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन् । भारतबाट फर्किदै गर्दा माडरमा चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले वडा अध्यक्ष यादवको साथबाट लागुऔषध बरामद गरेको हो ।
नाइट्रोभेट १५ पिस ट्याब्लेटसहित वडा अध्यक्ष यादव पक्राउ परेको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए । सरकारी नम्बर प्लेटको स १ ब ९३८ नम्बरको मोटरसाइकलमा आइरहेका बेला उनको साथबाट लागुऔषध बरामद भएको थियो । उनलाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान भैरहेको छ ।
यादव नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टी फुटेपनि उनी एमालेमै थिए ।
काठमाडौं । टि-२० विश्वकप अन्तरगतको म्याचमा हिजो पाकिस्तानले भारतलाई लज्जास्पद पराजय चखायो । बलियो मानिएको भारतलाई १० विकेटले हराएसँगै पाकिस्तानमा खुशीयाली छाउनु स्वभाविक थियो । तर, छिमेकी देश बंगलादेश र भारतकै कतिपय स्थानमा समेत पाकिस्तानको जितमा खुशी मनाइएको खबरले भने धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
भारत र पाकिस्तानबीचको क्रिकेट प्रतिस्पर्धालाई यी दुई देशमा मात्र नभएर विश्वभर नै चासोका साथ हेरिन्छ । अझ दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा त भारत-पाकिस्तान म्याचको रौनक नै बेग्लै हुन्छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका देशहरुमा भारतविरोधि भावना प्रबल छ । त्यसैले यी देशका धेरै मानिसहरु क्रिकेटमा भारतलाई समर्थन गर्दैनन् । आपसी दुश्मनका रुपमा चिनिएका भारत र पाकिस्तानबीचको म्याच हुँदा पाकिस्तानप्रति धेरैको सहानुभूति र समर्थन पाइन्छ । यस्तो समर्थन सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा प्रकट हुने गरेको छ ।
पाकिस्तानले भारतमाथि शानदार जित हासिल गरेपछि बंगलादेशस्थित पाकिस्तानी उच्चआयोगले ट्विटरमा एउटा भिडिओ पोष्ट गर्यो । उक्त भिडिओमा बंगलादेशीहरुले पाकिस्तानको जितमा खुसियाली मनाइरहेको देखिन्छ । उनीहरुले ‘पाकिस्तान जिन्दावाद’ को नारासमेत लगाएका छन् । भिडिओ पोष्ट गर्दा उच्चायोगले पाकिस्तानको जितमा खुशी मनाएकोमा बंगलादेशीहरुलाई धन्यवाद दिएको छ ।
Thank you Bangladesh for celebrating Pakistan’s victory in T-20. pic.twitter.com/EofriKo0jX
बंगलादेशीले भारतको विरोध र पाकिस्तानको समर्थन गर्नुका पछाडि मुख्य दुई फ्याक्टरले काम गरेका छन्ः इतिहास र धर्म ।
भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश विगतमा एउटै देश थियो । अंग्रेजहरुले भारतीय उपनिवेश छाडेसँगै भारत र पाकिस्तान सन् १९४७ मा छुट्टिए । भारतमा भएको स्वतन्त्रता संग्रामपछि अंग्रेजले नै दुई देश छुट्याइदिएर हिँडेका थिए । मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तानमा र हिन्दू बहुल क्षेत्र भारतमा रहे ।
तर, पाकिस्तान पनि सग्लो देशका रुपमा कायम रहन सकेन । विभिन्न राजनीतिक र अन्य विवादपछि पूर्वी पाकिस्तानले पश्चिम पाकिस्तानसँग स्वतन्त्रताको लडाईं लड्यो र सन् १९७४ मा बंगलादेश जन्मियो । पश्चिम पाकिस्तान हालको पाकिस्तान हो ।
भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएपछि यी देशको सम्वन्ध तिक्ततापूर्ण रहिआएको छ । उनीहरु एक-अर्कालाई एक नम्बरको दुश्मन मान्ने गर्छन् । भारत र पाकिस्तानको दुश्मनीको मुख्य स्रोत धर्म हो । भारत हिन्दूबहुल र पाकिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र भएकाले उनीहरु एक-अर्कालाई देखिसहँदैनन् ।
तर, भारत-पाकिस्तानको जस्तो तिक्ततापूर्ण सम्वन्ध बंगलादेश-पाकिस्तानबीच छैन । पाकिस्तानसँग लडाईं लडेर अलग देश बनेको भए पनि एउटै धर्मका कारण पाकिस्तानी र बंगालादेशीहरु भावनात्मकरुपमा नजिक छन् । बंगलादेश पनि मुस्लिम बहुल राष्ट्र हो । त्यही भएर पाकिस्तान र भारतको म्याच हुँदा बंगलादेशीको समर्थन पाकिस्तानपट्टि हुन्छ ।
सन् २०१६ को टि-२० विश्वकपको सेमिफाइनलमा भारत वेस्टइन्डिजसँग पराजित भएपछि बंगलादेशी टिमका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान मुस्फिकर रहिमले फेसबुकमै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।
उनले लेखेका थिए, ‘यो हो नि खुशी । अब म राम्ररी निदाउन सक्छु ।’
तीव्र विवाद भएपछि उनले आफू वेस्ट इन्डिजको ठूलो फ्यान भएको स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो स्टाटस हटाएका थिए ।
यता, हिन्दूबहुल भारतमा मुस्लिमको उपस्थिति उल्लेख्य (१५.५ प्रतिशत) छ । भारतीय मुस्लिमहरु पाकिस्तानप्रति सदासयता राख्छन् । भारतीय संस्थापनले देशको मुस्लिम समुदायलाई निरन्तर थिचोमिचो गर्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।
हिन्दु कट्टरपन्थि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि भारतीय मुस्लिममाथिको ज्यादति झनै बढेको छ । पछिल्लो दृष्टान्तका रुपमा हालै बलिउडका मुस्लिम नायक शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई मामुली केसमा गरिएको अतिरञ्जित कानूनी कारवाहीलाई लिन सकिन्छ । मुस्लिम सेलिब्रिटीहरुप्रति भारतमै बढ्दोरुपमा घृणा फैलाउने प्रयास भइरहेको छ । पाकिस्तानीहरु भने उनीहरुप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छन् । हालै एक पाकिस्तानी टिभी प्रस्तोताले शाहरुखलाई भारत छोडेर पाकिस्तान आउन आग्रह गर्दै ट्विट गरेका थिए ।
भारतीय संस्थापनले आफ्नो देशका मुस्लिम समुदायको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न गरिरहन्छ । राज्य सत्ताले मात्र होइन, जनस्तरबाट नै उनीहरुमाथि ‘देशविरोधि’ को आरोप लाग्ने गरेको छ । अनि, जब भारत र पाकिस्तानबीच क्रिकेट म्याच हुन्छ, त्यसबेला भारतका हिन्दूहरुले आफ्नै देशका मुस्लिम नागरिकहरुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् । भारतले पछिल्लो समय पाकिस्तानसँगको क्रिकेट म्याच पन्छाउन खोज्नुको एउटा कारण यो पनि हो । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा समेत भारतले पाकिस्तानी खेलाडीहरुलाई रोक लगाएको छ ।
आफ्नै पितापुर्खाहरुले बनाएको देश पाकिस्तानप्रति भारतीय मुस्लिमहरुको केही न केही सहानुभूति रहेको हुनसक्छ नै । त्यो बेलाबेलामा प्रकटरुपमा पनि देखिने गरेको छ । पाकिस्तानले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु जित्दा भारतका मुस्लिमहरुले बधाइ साटासाट गर्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाही भारतीय मुस्लिमहरुले पटका पड्काएर खुशीयाली मनाएका समाचारहरु पनि आउने गर्छन् । हिजो भारतलाई पाकिस्तानले हराएपछि भारतभित्रै खुशीयाली मनाइएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरगर्मी भएको थियो । विभिन्न स्थानमा मुस्लिमहरुले आतिशवाजी गरेको भन्दै फेसबुक र ट्विटरमा बग्रेल्ति भिडियोहरु पोष्ट भएका छन् ।
पूर्वक्रिकेटर विरेन्द्र सेहवागले पाकिस्तानको जितमा भारतका केही भागमा पटका पड्काइएको भन्दै ट्विट गरेका थिए । उक्त ट्विटमा विभाजित प्रतिक्रियाहरु आए । मुस्लिमहरुले सहवागको विरोध गरेका छन् भने अन्य भारतीयले उनको समर्थन गरेका छन् ।
सहवागकै जोडीका रुपमा खेल्ने अर्का पूर्वक्रिकेटर (हाल भाजपाका सांसद) गौतम गम्भीरले पनि त्यस्तै ट्विट गरेका थिए ।
उनले लेखेका छन्, ‘पाकिस्तानको जितमा जो अतिशवाजी गरिरहेका छन् उनीहरु भारतीय हुनै सक्दैनन् ।’
हिजो पाकिस्तानसँगको हारपछि भारतीय समर्थकहरुले एक खेलाडीलाई आक्रमणको निशाना बनाए, मोहम्मद सामी । उनले हिजोको म्याचमा खराब प्रदर्शन त गरेका थिए नै । तर, उनीमाथि हमला हुनुको मुख्य कारण चाहिँ उनी मुस्लिम हुनु नै थियो । सामाजिक सञ्जालमा भारतीयहरुले उनीमाथि ‘धोकेवाज’, ‘गद्दार’ जस्ता आरोप लगाउँदै भारत छोडेर पाकिस्तान जान चेतावनीसमेत दिएका छन् । ट्विटरमा सामी ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा समेत आएका थियो ।
सामीमाथि आक्रमण तेज भएपछि एकाध पूर्वक्रिकेटरले उनको बचाउमा लेखेका छन् । सचिन तेन्दुलकरले एउटै म्याचको प्रदर्शनलाई लिएर सामीको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताएका छन् । इरफान पठानले आफू सहभागी टिम पनि विगतमा पाकिस्तानसँग हारेको तर आफूलाई ‘पाकिस्तान जान’ नभनिएको बताएका छन् ।
यता पाकिस्तानी गृहमन्त्रीले भारतविरुद्धको जितलाई विश्वभरका मुस्लिमहरुको जित भन्दै ट्विट गरेका थिए ।
Mon, 10/25/2021 - 21:20
रूपन्देही । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का लुम्बिनी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकले १६१ सदस्यीय प्रदेश कमिटीको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएको छ । बैठकले आगामी मंसिर ३ देखि १६ गतेसम्म सबै जिल्लामा जिल्ला भेला गर्ने चरणबद्द कार्यतालिका पास गरेको र केही अतिआवश्यक विभागहरू आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग, राज्य व्यवस्था विभागका प्रमुख र कार्यलय सचिव पनि तोकेको नेता सिद्विचरण भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले वडा तहसम्म कमिटी बनाउने कार्ययोजना केन्द्रको सर्कुलर बमोजिम मंसिर ३ अघि सक्न, वर्गीय संगठनको जिल्ला नेतृत्व निर्माण अभियान चलाउन मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बैठकमा सबै जिल्ला अध्यक्षहरूले जिल्लाको सांगठनिक र राजनीतिक अबस्था प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका बजेट लगायतको कामको समीक्षा, किसानलाई परेको क्षतिप्रति क्षतिपूर्तिको माग, गठबन्धन दलहरूको भूमिकाको गम्भीर समिक्षा भएको यसबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारसंग छलफल गरिने निर्णय भएको छ । प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको सचिव राजु गुरूङले जानकारी दिए ।
Mon, 10/25/2021 - 21:04
काठमाडौं । नेपाल वायूसेवा निगमका नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज अधिकारी विगतमा निगमभित्रै यौन दुराचारमा मुछिएको पाइएको छ । निगमका महिला कर्मचारीहरुले उनीबाट यौनहिंसा भोगेको भन्दै महिला आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको सिफारिसमा अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको स्रोतले बतायो । अधिकारले विगतमा निगममै विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए । अर्थ विभागको निर्देशकका रुपमा काम गर्दा मातहतका कर्मचारीलाई यौन हिंसा गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
२०७४ सालमा सो विभागका कर्मचारीले महिला आयोगमा उजुरी दिएका थिए । अधिकारीले कार्यालयमै विभिन्न प्रकारले मानसिक यातना दिएको भन्दै पक्राउ गरेर कारवाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको थियो ।
उजुरीमा अधिकारीले विभिन्न ओहदामा रहँदा महिला कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा एकान्त कोठामा बोलाउने, आहा कति राम्री भएकी भन्ने, शरीरको संवेदनशील अंगहरुमा गलत नियतले हेर्ने र छुने प्रयास गर्ने, यौनिक हिंसाजन्य कुराहरु गर्ने, तथा यौनिक क्रियाकलाप गर्न खोज्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सको ३२ बुँदे माग
Mon, 10/25/2021 - 20:43
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सले आफ्ना विभिन्न मागहरुप्रति मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। च्याम्बर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेललगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष ३२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्व सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई पहल गर्न माग राखिएको बताए। निजीक्षेत्र मैत्री बजार नीति तथा कानूनहरुको अबिलम्ब निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए।
‘समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छ। त्यसका लागि हाम्रो अधिभावकको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा एवं विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री केसीलाई बुझाइएको मागपत्रमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक कार्यक्रम, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, कृषि औद्योगिकरण, उत्पादन तथा बजारिकरण तथा पर्यटन जस्ता दिर्घ महत्व भएका योजनाहरुमा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ।
निकासी पैठारीका लागि सरकारले निकै कम कानूनहरु निर्माण गरेको बताउँदै च्याम्बर्स अफ कमर्सले नीति तथा कानून निर्माण प्रकियामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेको छ।
त्यस्तै प्रादेशका राजश्व संकलक कार्यालयहरुलाई कर दातामैत्री बनाउन तथा भन्सार केन्द्रित अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुनेगरी सरकारी नीति बनाउन सरकारसमक्ष माग राखेको छ। मागपत्रमा प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा बिकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा आफूहरु उत्सुक भएको जनाउँदै च्याम्बर अफ कमर्सले सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च महत्व दिन आग्रह गरेको छ। मागपत्रमा भनिएको छ, ‘लगानी सम्मेलन र प्रदेशमा उत्पादित सामग्रीहरुको प्रदर्शनी मेला आयोजनालाई उपलब्धीमुलक ढंगले सम्पन्न हुने गरी निरन्तरता दिन र त्यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा नीजि क्षेत्रलाई सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं।’
त्यस्तै बुटवलको मोतिपूर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पहल गरी प्रदेशमा लगानी र ओद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रदेश गौरबका आयोजनाहरुलाई तिब्रता दिन, बुटवल-भैरहवालाई अन्तराष्ट्रिय ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न, स्वदेशमा नै रोजगारी र उत्पादनका अवसरहरु सिर्जना गर्न, लुम्बिनी आउने पर्यटकहलक्षित पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र नीजि क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड तयार गरी तिब्रता दिन माग राखिएको छ। ‘स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन स्थानीय उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ आवश्यक ध्यान दिन माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा उल्लेख छ।
सुर्खेतमा एमालेको अधिवेशन भोली, ९९ वडामामै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने
Mon, 10/25/2021 - 19:24
सुर्खेत । नेकपा एमाले सुर्खेतले भोली कात्तिक ९ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको छ । संघीय तर्फ दुई र प्रदेश सभातर्फ चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा ९९ वटा वडाहरु रहेका छन् ।
वडा अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीले जानकारी दिए । ‘हाम्रा नौ वटै पालिकाका ९९ वडामा भोली वडा अधिवेशन सम्पन्न हुने छ ।’ उनले भने, ‘त्यसकालागि सबै साथीहरु लागिसक्नु भएको छ । सबै वडाअध्यक्ष र पदाधिकारी एवम सदस्यहरु सर्वसम्मत चयन हुने भएका छन् ।’
कुनैपनि वडामा निर्वाचन नहुने बताउँदै अध्यक्ष शाहीले एकताबद्ध एमालेको सन्देश दिनका लागि सबै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न थालिएको बताए ।
Mon, 10/25/2021 - 19:14
काठमाडौं । एएफसी यू- २३ एसियन कप छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल बलियो इरानसँग पराजित भएको छ । ताजकिस्तानको दुसन्बेमा भएको खेलमा नेपाल बलियो इरानसँग ४-० गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
पहिलो हाफमा इरानलाई रोकेको नेपालले दोस्रो हाफमा भने कमजोर प्रदर्शन गर्‍यो । फिफा वरीयतामा एसियाको शीर्षस्थानमा रहेको इरानले दोस्रो हाफमा ४७, ७७, ७९ र थपिएको तीन मिनेटमा लगातार गोल गर्‍यो ।
इरानको जीतमा हुसेनले २ गोल गरे । यस्तै, मेहदी र यासिनले १-१ गोल गरेका थिए । हुसेनले खेलको ७७ र ७९ मिनेटमा गोल गरे भने मेहदीले खेलको ४७ मिनेटमा गोल गर्दा यासिनको नाममा अन्तिम गोल रह्यो । बलियो इरानविरुद्ध नेपालले सुरुवाती क्षणबाट नै रक्षात्मक खेल खेलेको थियो ।
यसअघि पामिर स्टेडियममा पहिलो हाफको १७ मिनेटमा इरानका कप्तानले पाएको पेनाल्टी सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो खेल बराबरीमा सकिएको थियो । नेपालका डिफेण्डर अभिषेक लिम्बूले इरानका खेलाडीलाई बक्सभित्र लडाएपछि रेफ्रीले इरानलाई पेनाल्टी मौका दिएका थिए ।
प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले इरानसँगको खेलमा नेपाली टोलीको कप्तानी तथा नेपाली पोष्ट अर्पण कार्कीलाई सम्हाल्ने जिम्मा दिएका थिए ।
अब, नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा ११ गते ताजकिस्तानसँग खेल्नेछ । फिफा वरीयतामा ताजकिस्तान ११८औं स्थानमा रहेको छ । यस्तै, तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले लेवनानसँग १४ कात्तिकमा खेल्नेछ । समूह विजेता फाइनल चरणमा छनोट हुनेछ ।
निर्वाचन प्रणाली नफेरिए थप संकट निम्तिन्छ: उपेन्द्र यादव
Mon, 10/25/2021 - 19:07
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नफेरिए मुलुकमा थप संकट निम्तिने बताएका छन् ।
सोमबार जनकपुरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली मुलुकका लागि घातक रहेको तर्क गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण दलिय समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।
यादवले भने, ‘गलत प्रणालीकै कारण निर्वाचन महँगिदै गएको छ । जसका कारण योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरु राजनीतिबाट पलायन हुन्छ र माफियाहरु हावी हुनेछन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आउन लागेकाले ठूला ठेकेदार र पैसावालाहरूको बोलवाला बढ्न थालेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । करौडों खर्चेर चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट विकासको अपेक्षा गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
Mon, 10/25/2021 - 19:00
काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायूसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
निगममा यसअघि अध्यक्ष सुशील घिमिरे अध्यक्ष थिए । उनले राजीनामा दिएपछि सो अध्यक्ष पद खाली थियो । अहिले अधिकारीलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाइएको हो । अधिकारी यसअघि निगमबाटै केही वर्षअघि निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए ।
निगममा हाल कार्यकारी अधिकार प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलसँग छ । उनलाई कमजोर बनाउने गरी सरकारले अधिकारीलाई ल्याएको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय भएको छैन, न्यायाधीशले बारसहितको छलफल बहिस्कार गर्नु निन्दनीय’
Mon, 10/25/2021 - 18:32
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले बारसहितको फुलकोर्ट बैठक बहिस्कार गर्ने १४ न्यायाधीशको निर्णयलाई निन्दनीय भनेको छ । बार एशोसियसनको सोमबार बसेको बैठकले बार र बेन्चबीचको सम्बन्धमा यस्ता क्रियाकलापले सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले बताए ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग बारको टोलीले भेट गर्दा बार प्रतिनिधिसहित फुल कोर्ट बैठक राखेर स्वचालित पेशी तथा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सम्बन्धी निर्णय अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
तर बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीसहितका न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिस्कार गरेकोमा बारले निन्दनीय भनेको हो । पोखरेलले बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको भनेर आएको समाचार पनि गलत भएको बताए ।
पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने- आज भएको निर्णय भनेको भोलि सल्लाहकारसहितको बैठक बस्ने र बारसँगको छलफलमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको निर्णयको निन्दा गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय बारले संस्थागत रुपमा गरेको छैन, व्यक्तिका कुरा आ-आफ्ना छन् ।
बार सल्लाहकारसहितको बैठक भोलि बस्दैछ । सल्लाहकारमा पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु र न्यापरिषदका पूर्व सदस्यहरु रहने गर्छन् । स्रोतका अनुसार बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा मागे पनि संस्थागत निर्णय भएको छैन ।
कालिकोट एमाले वडा अधिवेशन: महिला प्रतिनिधित्व न्यून, ८२ वडामा एक मात्रै महिला सचिव !
Mon, 10/25/2021 - 18:28
सुर्खेत । नेकपा एमाले कालिकोटका ८२ ओटा वडा अधिवेशनमा एक जना पनि महिला वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुन सकेनन । सबै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको दाबी गरेको कालिकोट एमालेले भने ४१० वडा पदाधिकारीमा जम्मा ६३ जना महिलालाई मात्रै निर्वाचित गर्न सकेको छ ।
आज नेपालप्रेसलाई प्राप्त भएको ७८ वडाको वडाअधिवेशनको पदाधिकारी नामावाली हेर्दा कुनैपनि वडामा वडाअध्यक्षको रुपमा एमालेले महिलालाई निर्वाचित नगराएको पाइएको हो । केहि स्थानमा उपाध्यक्ष बनाएको एमालेले एक जना मात्रै सचिव बनाएको पाइएको हो ।
तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. ११ मा मात्रै सचिव पदमा देवि शाही निर्वाचित भएर आएकी छिन् । अन्य उपसचिवमा भने महिलाको संख्या रहेपनि पदाधिकारीमा एमालेले ३३ प्रतिशत पुर्याउन भने सकेको छैन ।
‘हामीले सकेसम्म महिला नेतृत्वलाई ल्याउने प्रयत्न गरेका हौं तर अपेक्षा गरेअनुसार ल्याउन सकिएन ।’ एमाले जिल्ला अध्यक्ष नगेन्द्र शाही भन्छन्, ‘एमालेको विधान अनुसार पार्टी कमिटिमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढि महिला सुनिश्चित गरेका छौं ।’ यद्यपी उनले पदाधिकारीमा महिलाको संख्या अपेक्षाकृत ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा नौ वडा रहेका छन् । नौ वडामा वडा नं. ८ मा चाँदनी वम उपाध्यक्ष र सपना शाही उपसचिवमा आएकी छिन् । वडा नं. ९ मा ऐजना शाही बम मात्रै उपसचिवमा आएकी छिन् । अन्य वडाबाट पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको छ ।
कालिकोट सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्रमा ११ वटा वडा रहेका छन् । ११ मा वडा नं.३ मा गीता विक, ६ मा शोसिला बम शाही र ७ मा सुर्जा मल्ल मात्रै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । पापालिकामा उपसचिवमा भने महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
शुभकालिकामा ८ वडा छन् । ती आठ वडामा एकमा दुधमाया विक, ६ मा लालचन्द्रा नेपाली, ७ मा राजकुमारी शाही र आठमा ममता भण्डारी मात्रै उपाध्यक्षमा आएका छन् । वडा नं. ६ बाहेक अन्य वडामा उपसचिवमा महिला सहभागिता भने देखिएको छ ।
तिलागुफा नगरपालिकामा तीन उपाध्यक्ष आउँदा एक सचिवको रुपमा आएकी छिन् । वडा नं. १ मा लालशोभा बुढा, ९ मा रामलक्ष्मी उपाध्याय, ११ मा अम्मकली शाही उपाध्यक्ष बन्दा ६ मा देवि शाही सचिव बनेकी छिन् । यहाँको वडा नं. दुई, तीन, चार र पाँचको विवरण अझै आएको छैन ।
पचालझरना गाउँपालिकामा नौ वडाबाट ४५ पदाधिकारी चयन हुँदा महिला सहभागिता जम्मा ६ मात्रै रहेको छ । सान्नी त्रिवेणीमा पनि नौ वडा छन् । यहाँ पनि सात जना महिला मात्रै उपाध्यक्ष र उपसचिवमा निर्वाचित भएर आएका छन् ।
नरहरीनाथ गाउँपालिकामा नौ वडा रहेकोमा यहाँ पनि सात जनाको मात्रै पदाधिकारीमा ‘इन्ट्री’ भएको छ । महावै गाउँपालिकामा सात ओटा वडा रहेकोमा आठ जना महिला पदाधिकारीमा आएका छन् ।
रास्कोट नगरपालिकामा नौ वडा रहेकोमा महिला पदाधिकारकिो संख्या दयनीय देखिएको छ । यहाँबाट उपसचिवमा वडा नं. दुई बाट उति सार्की, तीनबाट हजुरा जैसी, ४ बाट सर्मिला सन्ज्याल र सातबाट चना महतारा मात्रै छानिएर आएका छन् ।
हस्तकला कोसेली मेला आजदेखि शुरु (भिडिओ)
Mon, 10/25/2021 - 17:48
काठमाडौं । सोमबारबाट हस्तकला कोसेली मेला शुरु भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघ र भाटभटेनीको संयुक्त आयोजनामा आजबाट नक्सालको भाटभटेनीमा हस्तकला कोसेली मेला सुरु भएको हो ।
मेला कात्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । आजदेखि १० गतेसम्म काठमाडौंको नक्सालमा सञ्चालन हुने छ भने कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म भक्तपुरको ठिमी र १४ गतेदेखि १६ गते ललितपुरको कृष्णगल्लीमा रहेको भाटभटेनी स्टोरमा सञ्चालन हुने मेलाका संयोजक विक्रमसिंह महर्जनले जानकारी दिए ।
२५ वटा स्टल रहने मेलाको मुख्य उद्देश्य हस्तकला सामाग्रीको आन्तरिक बजारमा विस्तार एवं प्रवर्धन रहेको महर्जनले बताए । कोरोना भाइरसका कारण थला परेको हस्तकला क्षेत्र विस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजान मेलाले सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास छ ।
प्रधानन्यायाधीसको अवज्ञा गर्न डा. केसीको अपिल, राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने
Mon, 10/25/2021 - 17:39
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्याधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा माग्दै उनलाई अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् । राजीनामा नदिए पदमुक्तीका लागि अहिंसात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनको चेतावनी छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा। केसीले सो चेतावनी दिएका हुन् । राणाले न्यायिक विचलन, भागवण्डा, सौदावाजी र भ्रष्टाारजन्य कार्यमा संलग्न भएर न्यायिक नैतिकताबाट च्युत भएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
‘न्यायालयको स्वतनत्रता र स्वच्छताको रक्षाको लागि तत्काल उहाँको राजीनामाको माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्न सरोकारवाला सबैमा अपिल गर्छांै ।’
कालिकोट एमालेको वडा अधिवेशनबाट को-को चुनिए ? यस्तो छ वडाध्यक्षदेखि पदाधिकारीको सूची
Mon, 10/25/2021 - 17:37
सुर्खेत । नेकपा एमाले कालिकोटका सबै वडा अधिवेशनको नजिता आएको छ । एमाले जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर शाही नेशनलका अनुसार शनिबार नै जिल्लाका सबै वडामा सर्वसम्म नेतृत्व चयन भइसकेको थियो, तर भौगोलिक विकटताका कारण ढिलो गरी एकमुष्ठ नतिजा आएको हो ।
हेर्नुहोस्, कालिकोट एमालेको कुन वडामा को-को चुनिए:
रेड पाण्डाको छालासहित चाबहिलबाट ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको चाबहिलबाट रेड पाण्डाको छालासहित ५ जना पक्राउ परेका छन् ।
पकाउ पर्नेमा काभ्रेको रोशी गाउँपालिका -३ का काठमाडौंको चाबहिल बस्ने २६ वर्षीय युवक लामा, नुवाकोटको पन्चकन्या गाउँपालिका -४ का चावहिल बस्ने २१ वर्षीय रुपेश अधिकारी, संखुवासभाको सिलिचुङ गाउँपालिका -६का २२ वर्षका अरुण राई, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका २का जोरपाटी बस्ने २० वर्षीय सुभाष गिरी, र रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका ६ का गोर्कण बस्ने २० वर्षीय दावा घले रहेका छन् ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई आइतबार चावहिलस्थित सत्कार क्याफेबाट प्रतिबन्धित दुर्लभ रेड पान्डाको छाला बिक्री गर्न ल्याइएको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुलाई आवश्यक कारबाहीको लागि आजै जिल्ला बन कार्यालय काठमाण्डौ पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।